जनताको ऋणमोचन गरिएको दिन :: सेतोपाटी :: Setopati
शुक्रबार, वैशाख १३, २०७६
जनताको ऋणमोचन गरिएको दिन
सेतोपाटी काठमाडौं, कात्तिक २२
नेपाल सम्वत् ११३९ आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यस सम्वतलाई हाल नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्।
राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाले बिक्रम सम्वत् ९३७ (इसं ८८०) मा गरिब जनताको ऋणमोचन गरी नेपाल सम्वत् सुरुआत गराएका थिए।
नेपाल सम्वतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय सम्वतको मान्यता पाएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. त्रिरत्न मानन्धरले जानकारी दिए।
'लिच्छविकालका राजा राघवदेवको शासनकालबाट सुरु भएको नेपाल सम्वत् पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म मौलिक सम्वतका रुपमा चलेको थियो। लिच्छविकालअघि शक सम्वत् प्रचलनमा थियो। नेपाल देशको नामबाट राखिएकाले यो मौलिक सम्वत हो,' उनले भने।
बिक्रम सम्वत २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको छ। नेपाल सम्वतलाई नयाँ वर्षका रूपमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, बाह्रबिसे, दोलखा भीमेश्वरलगायत नेवार समुदायको बाहुल्य रहेका स्थानमा विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ।
गरिब जनताको ऋणमोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्वतसमेत चलाएको कार्यको उच्च मूल्यांकन गर्दै २०५६ सालको नयाँ वर्षका दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेका थिए।
बिक्रम सम्वत २०६५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सम्वतले राष्ट्रिय मान्यता पाउने घोषणा गरेका थिए। कात्तिक कृष्ण औंसीका दिन बही खाता बन्द गरी नयाँ वर्ष अर्थात् कात्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन नयाँ बही खाताको सुरुवात गर्ने परम्परासमेत काठमाडौंमा छ।
आजैको दिन नेवार समुदायमा म्हः (आत्म) पूजा गरिन्छ। कात्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन आज नेवार समुदायका मानिसहरुले आफ्नो आत्म (म्हः) पूजा पर्व मनाउँछन्।
मानिसको आत्मा नै सबभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण भएकाले आत्मपूजा गर्ने परम्परा शास्त्रीय भएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा. रामचन्द्र गौतम बताउँछन्। आत्मसन्तुष्ट बनाई खुसी राख्न सके देवीदेवता पनि प्रसन्न भई आशीर्वाद दिने र जीवन लिएको पनि सार्थक हुने धार्मिक विश्वाससमेत छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कात्तिक २२, २०७५, ११:०५:००
१७ वर्षीया किशोरीले उमेर नपुगेको भन्दै रोकिन् आफ्नो बिहे
भान्छामा काम गरिरहेकी कञ्चनलाई पतिले पछाडिबाट लगाए आगो
पूर्वसांसद गायत्री साहको बच्चा डेढ महिनादेखि अस्पतालमै, न्यायिक समितिमा पुग्‍यो विवाद
आत्मघाती बम नपड्केपछि जोगियो श्रीलंकामा विनोद चौधरीको पाँच तारे होटल
राष्ट्रपतिको साडी डिजाइन गर्ने कल्पना संसारभर लोकप्रिय बनाउँदै नेपाली ढाका
फोटो पत्रकारिता दिवसको अवसरमा पोखरामा फोटो प्रर्दशनी
झुठो विवरण पेश गरी नागरिकता दिलाउन खोजेपछि
तीतो, तर ध्रुवसत्य! डा. अजय रिसाल
बालुवाटारमा करायो, एउटा खरायो वीरेन्द्र कटुवाल
निर्दयी भगवान ज्ञान बहादुर लामा "दोङ"